Semalt malunga negama elingundoqo kunye nokubhala umbhalo ofihliweyo
Igor Gamanenko, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi igama eliphambili lokugxila kunye nokubhalwa kwezinto ezifihliweyo ziingxaki ezimbini eziphambili ezinokuchaphazela iikholeji zakho, kwaye i-Google ilumkisa i-webmaster ukuphepha le nto yezinto. Xa kuziwa kumbhalo ofihlakeleyo kunye negama eliphambili lokugxotha, abaninzi abantu bacinga ngemigca engamashumi amahlanu emide kwimixholo emhlophe kwinqanaba lewebhu. Kuthetha ukufakwa kwesicatshulwa kumaphepha ewebhu injini yosesho kuphela, kungekhona kubasebenzisi - parchi a tema per bambini piemonte.
Kwakuyimimiselo eqhelekileyo kwiminyaka emininzi edlulileyo, nangona umgangatho ushintshile kwaye izinto ezininzi ezitsha zivela emva koko. Ngoku, sixelelwe yonke into malunga nokufihla itekisi kumaphepha, indlela yokuyibeka ngaphantsi kwezinye izinto kunye nendlela yokuyipapasha ngaphandle kokuvumela i-Google ukuba yayazi nayiphi na into.
Ukugxilongwa kwegama eliphambili ngokumalunga nokubeka amagama angundoqo kunye neengongoma ngokungathandabuzeki kwisiqulatho somxholo. Ngokuqhelekileyo, ayenzi nantoni na kwaye ithetha ukuphucula umgangatho wesayithi kwimiphumo ye-injini yokusesha. Ukuba ukholwa ukuba igama eliphambili lokugxila liya kukunceda nangayiphi indlela, wenza iphutha elikhulu.
Kukhuselekile ukuthetha ukuba ininzi yemigca yokubamba igama elingundoqo ibonakala kwaye icacile. Kuhle ukubeka amagama akho okhiye kunye nokuwafaka kufakwe kumxholo wakho, kodwa ukugxilwa kwegama elingundoqo kunye nokusetyenziswa kakubi akuvumelekanga. Ukuba ufuna ukufumana izikhundla eziphezulu kwi-SERP, kufuneka ugxininise kumgangatho kunokuba ubuninzi. Musa ukwenza umxholo wakho ubonakale ungacatshulwa kwaye awuqhelekanga ngamagama amaninzi.
Kutheni le nto ingxaki enkulu kwiziko lakho? Ukuba lo mbuzo uphawula ingqondo yakho, makhe ndikuxelele ukuba xa abantu befuna amagama angundoqo kunye nokuphela kwiwebhusayithi yakho, bafuna ukwazi okungakumbi malunga nala mazwi asemqoka kunye namagama. Kwaye ukuba unikezele umxholo ophantsi, akukho nzuzo kuwe nakwiwebhusayithi yakho ukusinda ixesha elide. Umbhalo ofihliweyo kunye negama eliphambili lokugxininisa liqinisekisa ukuba amava omsebenzisi ahluphekileyo, awonakalise igama lakho kwiwebhusayithi.
Ukuba i-Google ikukhumbule ngegama eliphambili okanye ukubhalwa kwimiyalezo engacacileyo, kufuneka uzame ukususa ngokukhawuleza kunokwenzeka, uqinisekise ukuba ukuthembeka kunye nomgangatho wesayithi lakho kugcinwa. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungasusa njani amagama amaninzi ukusuka kumxholo wakho, sinokucebisa ukuba udibene nochwepheshe be-SEO okanye uzame ukutshintsha umxholo omdala ngamanqaku amatsha kunye nokuphuculweyo.
I-Google isoloko icebisa ukuba kufuneka sibhale inkqubo yethu yokucoca kunye nokwenza ikopi yokugcinwa kwedatha yethu. Oku kuza kusindisa ixesha lakho, kwaye unokwenza lula ukulungisa umbhalo ofihliweyo kunye negama elingundoqo.